सीएमएस एक्सपो: मध्यपश्चिमा मार्केटिंग र टेक्नोलोजी सम्मेलन बीच एक रत्न | Martech Zone
सीएमएस एक्सपो: मध्यपश्चिममा मार्केटिंग र टेक्नोलोजी सम्मेलनहरू बीच एक रत्न
बुधवार, मई 12, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 माइकल रेनल्ड्स
मलाई यसमा बोल्ने खुशी लाग्यो सीएमएस एक्सपो शिकागो मा पछिल्लो हप्ता। यो सम्मेलन पहिलो पटक मैले भाग लिएको थिएँ तर मलाई के आशा गर्ने भनेर निश्चित थिएन। मलाई खुशी लाग्यो यो कत्ति महान थियो।
CMS एक्सपो सामग्री शिक्षा प्रणाली र वेबसाइट सेवाहरूमा समर्पित एक शिक्षा र व्यापार सम्मेलन हो। यो व्यापार र टेक्नोलोजी थिमको वरिपरि केन्द्रित ट्र्याक को एक संख्या को सुविधा। यस बर्षको सम्मेलनमा पाँच ट्र्याकहरू जुमला, WordPress, Drupal, Plone, र व्यापार थिए। म अझै पनी उनीहरूमा फिचर गर्न काम गर्दैछु मेरो मनपर्ने CMS अर्को पटक। पहिलो चार ट्र्याकहरू विशेष रूपमा सम्बन्धित CMS मा केन्द्रित थिए जबकि व्यवसाय ट्र्याकले मार्केटिंग, अनुसन्धान, उत्तम अभ्यासहरू, सामाजिक मिडिया, र अन्य व्यापार-विशिष्ट शीर्षकहरू समेट्यो।
मैले व्यापार ट्र्याकका लागि दुई प्रस्तुतीकरणहरू दिएँ: "अत्यधिक प्रभावी वेबसाइटहरूको7आदतहरू" र "व्यवसायका लागि ट्विटर"। दुबै धेरै राम्ररी चले र राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गरे। यो एक ठूलो भीड थियो र मसँग उत्कृष्ट प्रश्नहरू र छलफलहरू थिए।
यहाँ मलाई CMS एक्सपोको बारेमा मनपर्‍यो:
सबैजना अत्यन्त मैत्री र बहिर्गमन थिए
स्पिकरहरू महान थिए
सम्मेलन वेबसाइट धेरै उपयोगी र राम्रो गरीएको थियो
सुविधा (होटल ओरिंगटन) उत्कृष्ट थियो
आयोजकहरु वास्तव मा धेरै नेटवर्कि with को साथ एक महान कार्यक्रम मा राखे
यो महँगो छ, जसको अर्थ उच्च स्तरको व्यवसायहरू उपस्थितिमा छन् (हो, मलाई यो मनपर्‍यो)
केवल मलाई त्यस्तो मनपर्दैन भन्ने तथ्य यो थियो कि सबै चीज ढिला हुन थाल्छ त्यसैले मैले मेरा दुबै सत्रहरूलाई थोरै छोटो बनाउनुपर्‍यो तर यो एकदम सानो मुद्दा थियो।
म Google एनालिटिक्स र बजार अनुसन्धान मा केहि महान सत्रहरुमा भाग लिएको र नयाँ व्यक्तिहरु संग भेट गर्न एक महान समय थियो। जो प्राविधिक ट्र्याकहरूमा अधिक रुचि राख्दछन्, विशेष गरी कुनै एक सुविधा खुला स्रोत सीएमएसमा सम्बन्धित, उनीहरूले सामग्री धेरै मूल्यवान पाउनेछन्। मैले यी केहि सत्रहरूमा मेरो टाउको ठोकाएँ र यी ट्र्याकहरूको बारेमा धेरै सकारात्मक ट्विटर कुराकानी पनि देखें। सीएमएस एक्सपोमा धेरै वक्ताहरू मूल संस्थापकहरू थिए र CMSs का प्रतिनिधित्व गर्नेहरू थिए।
२०१० सीएमएस एक्सपोमा उपस्थिति करीव was०० जति थियो र यसमा उत्कृष्ट प्रदर्शकहरूको पूर्ण समूह पनि थियो जसले आफैंलाई मार्केटि and गर्ने र वातावरणमा योगदान पुर्‍याउने उत्कृष्ट काम गरे। उनीहरूले आइप्याडहरू पनि दिइरहेका थिए! म फ्रान्स र नर्वे सहित टाढा ठाउँबाट धेरै वक्ताहरू र उपस्थितिहरू हेर्न पनि इच्छुक थिएँ।
सम्मेलनको वातावरण पक्कै पनि रमाईलो, सिक्ने, र अरूलाई मद्दत पुर्‍याउने हो र यसको एक हिस्सा हुन पाउँदा खुसीको कुरा थियो। जोन र लिन्डा कुन्नेन (सीएमएस एक्सपो संस्थापक) ले अद्भुत काम गरे र म अर्को वर्षको कार्यक्रमको लागि उत्सुक छु।
यदि तपाईं मार्केटिंग र / वा प्रविधिमा काम गर्नुहुन्छ भने, अर्को बर्षको सीएमएस एक्सपोमा भाग लिने विचार गर्नुहोस्। यो तपाईंको समयको लायक हुनेछ।
टैग: सेमी एक्सपोबजार सम्मेलनमध्यपश्चिम सम्मेलनप्रविधि सम्मेलन
Textbroker नि: शुल्क अनौंठो सामग्री प्रमाणिकर्ता सुरूवात गर्‍यो
मई 18, 2010 मा 9: 17 एएम
राम्रो लेख, धन्यवाद। CMS एक्सपो मा ExpressionEngine को बारे मा कुनै बज?
मई 21, 2010 मा 7: 11 एएम
ExpressionEngine about को बारेमा एक झलक छैन